Omume 8 na Teknụzụ Ngwaahịa Azụmaahịa | Martech Zone
Ụlọ ọrụ na -ere ahịa bụ nnukwu ụlọ ọrụ na -arụ ọtụtụ ọrụ na ihe omume. Na post a, anyị ga -atụle ọnọdụ kachasị elu na ngwanrọ mkpọsa. Na -echeghị nke ukwuu, ka anyị gaa n'ihu na ọnọdụ.
Ịkwụ ụgwọ Nhọrọ - obere akpa dijitalụ na ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ dị iche iche na -agbakwụnye mgbanwe na ịkwụ ụgwọ ịntanetị. Ndị na -ere ahịa na -enweta ụzọ dị mfe ma dị nchebe iji gboo ụgwọ ịkwụ ụgwọ nke ndị ahịa. Na ụzọ ọdịnala, naanị ego ka enyere ka ụzọ ịkwụ ụgwọ nke mepụtara nnukwu nsogbu ijigide, emesịa ejiri kaadị debit na kaadị kredit malite nke dị mfe mana usoro nwere ọtụtụ ihe na-ewekwa oge. N'oge a, àkwà mmiri niile gafere ma ndị mmadụ amalitela ịhọrọ obere akpa dijitalụ iji chekwaa ego ha wee kwụọ ụgwọ. Nke a na -enyere aka ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ maka ndị ahịa yana n'otu oge ahụ, ndị na -ere ahịa na -enweta uru nke ụgwọ azụmaahịa dị ala.
Nlekọta ndi mmadu - Ndị ahịa na -enwekwa nchegbu gbasara mmemme mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yana mmata nke ụlọ ọrụ ahụ mere. Ndị na-ere ahịa na-enwe nrụgide ka ha rụọ ọrụ mmekọrịta gburugburu ebe obibi. Ngalaba azụmahịa na-ekpebi ibelata ojiji plastik, kemịkal, akpụkpọ anụ, ajị anụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ iji nọrọ na gburugburu ebe obibi. Ọtụtụ ngalaba azụmaahịa na -ahọrọ nkwakọ ngwaahịa nwere ike mebie iji nyere okike aka.
Ntinye amụma -Industrylọ ọrụ na-ere ahịa na-arụ ọrụ na data buru ibu wee bụrụ nke data na-akwali. Atụmatụ ọdịnihu ga -enyere ndị ọchụnta ego aka ime mkpebi ndị ka mma ma nyochaa mpaghara dị iche iche dị ka mgbanwe ịzụrụ na mkpesa, akparamagwa ndị ahịa, usoro na nyocha njem ha. Ụkpụrụ omume na omume ndị ahịa nwere ike inye aka ibelata ngwaahịa anaghị azụta ma bulie ahịa ndị ọzọ site na ilele mmasị na mmasị onye ahịa. A pụkwara ịghọta usoro mbelata ego nke ndị na -ebubata ihe na ịzụrụ ihe dị ka ọ ga -esi nweta onyinye kacha mma.
Ngwa Weebụ -Ngwa ndị dabere na ihe nchọgharị anaghị achọ nbudata ngwa mkpanaka ma bụrụ ezigbo ngwọta ka ha na-enye ọtụtụ uru dị ka mmelite dị mfe, nkwado ntọala yiri nke ahụ, usoro enyi, na-anabata nke ọma, anaghị achọ ịdị elu. ịntanetị, igwe ọchụchọ na -eji nke ọ bụla na -adị mfe ma na -akwado ọkwa.
Amamịghe echiche - Ozi mara mma na robots na -enyere ụlọ ọrụ aka site na ịchekwa data ego niile yana sistemụ ndị a nwere ike ịnye ndụmọdụ ahaziri iche, ịchọta ngwaahịa ziri ezi, igodo dị mfe, mmasị ndị ahịa na ọtụtụ ndị ọzọ.
Enyemaka Olu -Ndị ahịa na-eji ndị enyemaka olu na njem ịzụ ahịa ha n'ịntanetị na Amazon Alexa, google home, Siri na ọtụtụ ndị ọzọ dị ka ndị enyi n'ime ụgbọ ala na ndị enyemaka ụlọ. Ndị na-ere ahịa na-abanye na teknụzụ a yana ọchụchọ dabere na mkpọsa. Ndị na-enyere aka n'olu na-abụkarị ndị a pụrụ ịtụkwasị obi karị n'ihi na ha na-adị ngwa ngwa ma dị mfe ịnweta ụzọ na-enweghị aka. Nke a na -esitekwa na njedebe nke ihe isi ike n'ọgbọ nke nsonaazụ ọchụchọ, nchọgharị siri ike n'ihi nnukwu ndepụta nsonaazụ ọchụchọ na ndị ọzọ ole na ole.
Ndepụta Ngwaahịa - Ndị na -ere ahịa kwesịrị ijikọ ọtụtụ ihe ọnụ mgbe niile ma chọọ ngwaọrụ njikwa yana ọtụtụ atụmatụ iji jikwaa ma na -enyocha ngwa ahịa. Njirimara kachasị ọhụrụ dị na ngwanrọ na-ere ahịa gụnyere agbụ ọkọnọ akpaaka, sistemụ njikwa, ịkọ ahịa, nchọpụta ihe ngwaahịa, nyocha oge, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ihe ndị a niile nwere ike inye aka belata oke ibu nke ndị na -ere ahịa site na ijikwa ọtụtụ ihe omume n'ịntanetị.
Nchọpụta Anya - Ọchụchọ anya bụ otu ohere azụmaahịa na -ewu ewu nke ewepụtara n'oge ndị na -adịbeghị anya. Ọchụchọ a na -ahụ anya na -enye ndị ọrụ ohere ịchọta ngwaahịa ha na -achọ kemgbe. Nke a na -eme ka ndị ọrụ dịrị nso ịzụrụ ka nsonaazụ ọchụchọ dabara nke ọma n'ihe ha chọrọ.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime usoro ndị kachasị elu na ngwanrọ mkpọsa yana mgbanwe na teknụzụ na mmelite, a na-agbakwunye usoro ndị ọzọ na ụlọ ọrụ ahụ. Maka ndepụta nke teknụzụ ngwanrọ kachasị elu na akara ngosi, lelee Techimply.
Tags: ngwa dabere na ihe nchọgharịNdepụta ngwakọnhọrọ ịkwụ ụgwọnchịkọta amụmaretailereta aingwanrọ na -ere ahịausoro ngwanrọ na -ere ahịausoro teknụzụ mkpọsaere ahịammata nke ndi mmadunyocha anyaenyemaka olungwa weebụ